စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 6/25/2011 01:16:00 PM
၀တ္ထုတိုလေး လာဖတ်သွားတယ် မမယ်။
မလုပ်ပါနဲ့ အမ :(
26/6/11 10:56 AM
ဇာတ်သိမ်းတော့မှ သူကိုယ်တိုင် ခုန်ချတာ ဖြစ်နေတဲ့ အလှည့်လေးကို သဘောကျလိုက်မိတယ်။
26/6/11 11:26 AM
မည်သူမဆိဲု ဒီဝတ္ထုထဲက မိန်းကလေးရဲ့ ခံစားချက်မျိုး ကိုယ်တိုင် ရေရှည်ခံစားနေရရင်တော့ psychiatrist တယောက်နဲ့ ဆွေးနွေးသင့်တယ် လို့ ထင်မိပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ depressed ဖြစ်နေရင် psychiatrist နဲ့ တွေ့လေ့ရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံး anti-depressant prescription တော့ ရလာတာပေါ့ဗျာ။
ခင်ဗျားတို့လည်း ကြားဖူးပြီးသား ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်မယ်။ စိတ်ပညာမှာ James-Lung Theory ဆိုတဲ့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ သီအိုရီတခုရှိတယ်ဗျ။ “ဝမ်းနည်း လို့ ငိုမိတာ မဟုတ်။ ငိုမိလို့ ဝမ်းနည်း သွားတာ” ဆိုတာပါ။ လူအတော်များများ ကတော့ လက်မခံချင် ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ therapy တခုအနေနဲ့ အလုပ် ဖြစ်တယ် လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဥပမာ၊ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲနေရင် ကိုယ့်ရပ်ကွက်ကို ၁ ပတ်၊ ၂ ပတ်၊ ၅ ပတ် လောက် ပတ်ပြေးနေ လိုက်ရင် ချွေးတွေ ဘာတွေ ထွက်ပြီး ကြေကွဲနေတဲ့ ခံစားမှု ခဏနေရာမရ ဖြစ်မယ်။ ပြောချင်တာက emotions တွေဟာ သူတို့ အပြည့်အဝ ကြီးထွားဖို့ သူတို့နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ရှိတဲ့ physical activity တရပ်ကို လိုအပ်တယ် ဆိုတာပါ။ အဲဒီတော့ depressed ဖြစ်နေရင် သူနဲ့ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ physical activity ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောပြီး ဟာသတွေပြော နေလိုက် တာမျိုး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော့် comment တော်တော် ရှည်နေပြီမို့ တော်လိုက်ပါဦးမယ်..း))
27/6/11 5:48 AM
အမ စိတ်ညှို့ခံလိုက်ရတာလား??? ဖတ်သွားတယ်။ စာက ကျွန်မကို မျက်လုံးမခွာမိအောင်ကို ဆွဲဆောင်တယ်။ အရမ်းးးးးကောင်းတယ်။
28/6/11 7:40 PM
2/7/11 12:44 AM
အစ်မမယ်ကိုး ကို Facebook မှါ ရှာမရတေါ့ဖူးးးးးးး :(
Btw, I also plan to jump out of the world.
Next time, try to sms me b4 jumping out.
ရေမျောသီးကိုနည်းနည်းသတိရတယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်ရေးမယ်ဆိုရင် နောက်ဆို ဂျူးကို ကျော်တက်သွားနိုင်တယ်။
အထူးသဖြင့်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုရေးတဲ့နေရာမှာ ယောကျာ်းတွေက အသုံးကျလေ့မရှိဘူး။ အဲဒီလိုလည်း ခံစားရပုံမရလို့ဖြစ်မယ်။ အဲဒါကြောင့် အသေးစိတ်ရေးရရင်ပျင်းသွားသလားမသိဘူး။
ဇာတ်လမ်းကိုကြိုက်တယ်။ ဖြတ်ပိုင်းထားတဲ့ အပိုင်းလေးကိုကြိုက်တယ်။ အ၀န်းအ၀ိုင်းကတော့ သေးသေးလေးပဲဖြတ်ပြလိုက်တော့ မစည်ကားသလိုဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ climax ကိုဖွဲ့တော့ ခုန်ကျော်ပြီးလုပ်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒါကလည်း ကိုယ့်အမြင်ကိုယ်ပြောတာ။ ဒီထက်ကောင်းတာတွေ ဆက်ရေးနိုင်ဦးမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်တယ်။
အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံးစာကြောင်းကို သဘောကျတယ်။
ဒီပြတင်းပေါက်ကနေ ခုန်ချဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ ကျွန်မ မစဉ်းစားခဲ့ဖူးပါဘူး။
စာရေးတဲ့သူတိုင်းမှာ ဟန်တစ်မျိုးစီရှိတယ်။ တစ်ချို့ကလေလို့ပြောတယ်။ မယ်ကိုးလေသံ ပေါက်တယ်။ လိုရင်းလည်းရောက်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။
5/7/11 5:34 PM
9/7/11 4:57 PM
သူမ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်နေတဲ့ ကိုယ်ပွား စိတ်ခွဲ တစ်ခု ရှိနေတယ် ထင်ပါရဲ့..
ကြိုက်တယ်ဗျို့..။ ကလေးမရဲ့ နောက်ခံအဖြစ်အပျက် ပါးပါးလေးလောက် ပါစေချင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်သူ တွေးချင်သလို တွေးဖို့ စာရေးသူက တမင်ဖယ်ချန်ထားခဲ့တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ် မဟုတ်လား။
2/12/11 11:44 AM